समाचार - वार्षिक बैठकमा गहनाहरू कसरी छनौट गर्ने?
वार्षिक बैठकमा गहना कसरी छनौट गर्ने?
जब वसन्त फेस्टिवल आउँदैछ, TA लाई के पठाइनेछ उनको खुशीमा उनको आँखामा हाँसोको लागि? Lingling बताउँछ कि एक रत्न गहना पर्याप्त छ। बिभिन्न गहनाको अर्थ बिभिन्न प्रेम गोप्य शब्दहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। के तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि टीएले सही अनुमान लगाउन सक्छ कि?
कुन केटीले रोमान्स मन पराउँदैन? ठीक सही समय, उनलाई ध्यानपूर्वक चयन गरिएको हार पठाउनुहोस्। होमोफोनिक “प्रेममा फसेको” बाहेक, हारमा प्रेमको अर्को परत पनि छ, "म तपाईको ह्रदयमा कडा रूपमा बाँध्न चाहान्छु र अरु मान्छेले लैजान नपरोस्।" यस्तो नाजुक र दबंग घोषणाले पक्कै पनि उनको मुटु मीठो बनाउनेछ।
क्रिस्टल गुलाबी पाउडर मीठो र चिल्लो होइन, दुबै बीचको मिठो सम्बन्धको रूपमा, त्यहाँ एक सुन्दर फूल-आश्रित छ, क्रिस्टल जेड यो मोजेक जेड नेकलेस सीरीज गर्लफ्रेंडको लागि धेरै उपयुक्त छ।
ब्रेसलेट - अभिभावक
कुन केटीहरू चिरस्थायी प्रेम गर्न चाहँदैनन्? हुनसक्छ तपाईको हृदयमा उनको स्थिति अपूरणीय छ, र तपाईको भावनाहरु पनि गम्भीर र हेरचाह छ। यद्यपि तपाईले आफैलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्दछ, उसलाई थाहा दिनुहोस्, र उसलाई सहजै महसुस गर्नुहोस्। उनलाई एउटा कंगन पठाउनुहोस्, जसको अर्थ "प्रेम बचत गर्नुहोस्", उनलाई जीवनभर बाँध्न र आफ्नो बाँकी जीवन बिताउने चाहना व्यक्त गर्दै।
उनको क्रिस्टल नीलम कंगन पठाउन राम्रो छ, नीलम "प्रेमको अभिभावकको ढु stone्गा" हो, यसको अर्थ राम्रो, सरल र लचिलो डिजाइन हो, त्यसैले उनी अझ सुन्दर र सुन्दर छिन्।
रिings्गहरू - प्रेमको लागि घण्टी दिनुहोस्
कुन केटी आजीवन प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न चाहँदैन? यदि तपाई एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई तपाइँ "तपाइँको औंला राख्नुहोस्, यसलाई पुरानो राख्नुहोस्" चाहानुहुन्छ, उनलाई धेरै लामो पर्खाइ नदिनुहोस्, उनको लागि औंठी लगाउनुहोस्, र उनको अत्यन्तै निष्कपट र निष्कपट अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुहोस् "उसलाई प्रेम गर्नुहोस्। मेरो हृदयमा, म उनको प्रेमको लागि त्याग्न तयार छु, "उनको खुशीयाली विवाह गर्दै।
क्रिस्टल रूबी लगाउनुहोस् मुटुको आकारको औठी, जुनबाट एक अर्काको प्रेम र प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गर्न।
उत्सव, उनको क्रिस्टल आत्मा रत्न गहना पठाउनुहोस्
उपहार सुन्दर र अर्थपूर्ण छन्
उसलाई खुसी पार्न महत्त्वपूर्ण छ
यस भन्दा बढि के उपयुक्त छ?
पोष्ट समय: जुन २०-२०88